1 Samuel 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 Ɛnna Samuel faa ngotoa+ no, na ohwiee ngo no guu n’atifi, na ofew n’ano+ kae sɛ: “Ɛnyɛ Yehowa na wasra wo ayɛ wo ɔpanyin,+ n’agyapade+ so? 2 Sɛ ɛnnɛ wufi me nkyɛn rekɔ a, wubehu mmarima baanu wɔ Rahel ɔdamoa+ nkyɛn wɔ Selsa, Benyamin asase so, na wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, ‘Mfurum a wokɔhwehwɛɛ wɔn no, wɔahu wɔn, na wo papa agyae mfurum+ no akyidi redwen mo ho sɛ: “Dɛn na menyɛ wɔ me ba yi ho?”’+ 3 Na fi hɔ toa so kɔ w’anim ara kodu Tabor dua kɛse no ase, na ɛhɔ na wubehyia mmarima baasa a wɔrekɔ nokware Nyankopɔn anim wɔ Betel;+ obiako kura mmirekyi mma+ abiɛsa, obiako kura paanoo+ nkuruwankuruwa abiɛsa na obiako nso sõ bobesa+ ahina mã. 4 Na wobebisa sɛnea wo ho te,+ na wɔama wo paanoo abien; gye wɔ wɔn nsam. 5 Ɛno akyi no, kɔ nokware Nyankopɔn+ koko no so, faako a Filistifo asraafodɔm+ wɔ no. Na ɛbɛba sɛ wudu kurow no mu a, wubehyia adiyifokuw+ bi a wɔresian afi sorɔnsorɔmmea+ hɔ a nkurɔfo rebɔ asanku+ ne mpintin+ ne abɛn+ ne sankuten+ di wɔn anim ma wɔrehyɛ nkɔm. 6 Na Yehowa honhom+ besi wo so, na wo ne wɔn nyinaa bɛkasa sɛ adiyifo,+ na wobɛdan onipa foforo. 7 Na saa nsɛnkyerɛnne+ yi ba mu ma wo a, yɛ nea wubetumi biara,+ efisɛ nokware Nyankopɔn di w’akyi.+ 8 Di m’anim sian kɔ Gilgal,+ na hwɛ! mesian aba wo nkyɛn abɛbɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe+ afɔre. Twɛn nnanson+ kosi sɛ mɛba wo nkyɛn, na mɛma woahu nea ɛsɛ sɛ woyɛ.” 9 Ɛbae sɛ ɔdan ne ho sɛ ɔrefi Samuel nkyɛn akɔ ara pɛ, Onyankopɔn dan ne koma yɛɛ no foforo,+ na nsɛnkyerɛnne+ yi nyinaa sisii saa da no. 10 Enti wofii hɔ kɔɔ koko no so, na adiyifokuw bi behyiaa no; ɛhɔ ara na Onyankopɔn honhom sii no so,+ na ofii ase kasae sɛ odiyifo+ wɔ wɔn mu. 11 Na ɛbae sɛ wɔn a wonim no kan no huu no no, hwɛ, na ɔne adiyifo no rehyɛ nkɔm. Enti nkurɔfo bisabisae sɛ: “Dɛn na ayɛ Kis ba yi? Saul nso ka adiyifo no ho anaa?”+ 12 Na ɔbarima bi a ofi hɔ bisae sɛ: “Na wɔn papa ne hena?” Ɛno nti na abɛyɛ akasabebu+ sɛ: “Saul nso ka adiyifo no ho anaa?” 13 Afei bere a ɔkasae sɛ odiyifo wiei no, ɔkɔɔ sorɔnsorɔmmea hɔ. 14 Akyiri yi, Saul papa nua bisaa ɔne ne somfo no sɛ: “Mokɔɔ he?” Ɛnna ɔkae sɛ: “Yɛkɔhwehwɛɛ mfurum+ no, na yekokyinkyinii sɛ yebehu wɔn anaa, nanso yɛanhu wɔn. Enti yɛkɔɔ Samuel nkyɛn.” 15 Ɛnna Saul papa nua no kae sɛ: “Mesrɛ wo ka kyerɛ me, dɛn na Samuel ka kyerɛɛ mo?” 16 Ɛnna Saul buaa ne papa nua no sɛ: “Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ wɔahu mfurum no.” Nanso ahenni no ho asɛm a Samuel kae no de, wanka ankyerɛ no.+ 17 Na Samuel frɛfrɛɛ ɔman no behyiae Yehowa anim wɔ Mispa,+ 18 na ɔka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni,+ ‘Ɛyɛ me na miyii Israel fii Egypt, na migyee mo fii Egyptfo nsam+ ne ahenni a wɔhyɛɛ mo so no nyinaa nso nsam.+ 19 Na mo de, ɛnnɛ moapo mo Nyankopɔn+ a ogyee mo fii mo haw ne mo amanehunu nyinaa mu no, na moaka sɛ: “Dabi, ɔhene ara na si wɔ yɛn so.” Enti afei munnyinagyina Yehowa anim sɛnea mo mmusuakuw+ ne mo apem apem te.’” 20 Enti Samuel maa Israel mmusuakuw no nyinaa twiw bɛnee,+ na woyii Benyamin abusuakuw no.+ 21 Afei ɔmaa Benyamin abusuakuw no twiw bɛnee, sɛnea wɔn mmusua te, na woyii Matrifo abusua no,+ na woyii Kis ba Saul.+ Na wɔhwehwɛɛ no, nanso wɔanhu no. 22 Ɛnna wobisaa+ Yehowa bio sɛ: “Ɔbarima no abedu ha anaa?” Na Yehowa kae sɛ: “Hwɛ, wakohintaw+ nneɛma no mu.” 23 Enti wɔde mmirika kɔfaa no fi hɔ bae. Bere a obegyinaa ɔman no mu no, na ɔware sen nnipa a wɔaka no nyinaa, efi ne mmati rekɔ.+ 24 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ: “Moahu nea Yehowa apaw no+ no, sɛ obiara nte sɛ ɔno ɔman yi nyinaa mu?” Na ɔman no nyinaa bɔɔ ose kae sɛ: “Ɔhene nnya nkwa!”+ 25 Afei Samuel kaa ahenni no ho nhyehyɛe+ kyerɛɛ ɔman no, na ɔkyerɛw wɔ nhoma mu de kɔtoo Yehowa anim. Na Samuel gyaa ɔman no nyinaa kwan ma obiara kɔɔ ne fie. 26 Saul nso kɔɔ ne fie wɔ Gibea,+ na mmarima akokodurufo a Onyankopɔn aka wɔn koma no ne no kɔe.+ 27 Mmarima ahuhufo+ no de, wɔkae sɛ: “Oyi de, ɔbɛyɛ dɛn agye yɛn?”+ Na wobuu no animtiaa,+ na wɔamfa akyɛde biara ammrɛ no.+ Nanso ɔyɛe sɛ mum.+